POUND oovimba-Funda ukurhweba
Iponti yaseBritane iRetreats ilandela iRally yeBoE-Induced Rate
Ngokutsho kweReuters, i-pound yaseBrithani (i-GBP)-eyawa ngoLwesihlanu-yayisendleleni yokuthumela inzuzo yayo ephezulu yeveki ukususela ngo-Oktobha emva kokuba iBhanki yaseNgilani (i-BoE) ibe yi-G7 yokuqala yezoqoqosho ukwandisa amaxabiso ayo okuboleka imali.
I-GBP / USD yehla nge-0.64% ngoLwesihlanu, nangona ingekude ne-$ 1.3376 yeeveki ezintathu eziphezulu emva kwesigqibo se-BoE esiphezulu senzala ngoLwesine.
Isigqibo se-BoE safika njengento ephazamisayo kubabukeli-emva kokuba inyuse amaxabiso ayo ngamanqaku asisiseko se-15 ukuya kwi-0.25%-eyayithumela i-Bank stocks kunye ne-pound.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, iBritane yaba lilizwe lokuqala le-G7 ukunyusa amaxabiso ukusukela oko kwaqala ubhubhane ngo-2020. Oko kwathiwa, i-US Federal Reserve ikwaveze ukuba iya kuqinisa umgaqo-nkqubo wayo wezoqoqosho ngo-2022. I-European Central Bank (ECB) kuphela. ibuyele kancinci kwi-stimulus.
I-BoE iSpeed ​​​​Ireyiti yokuNyusa iTim-time-Ukunyusa iiReyithi izihlandlo ezithathu ngo-2022
Ngeli xesha, idatha yentengiso yentengiso yase-UK engcono-kunokuba ibilindelwe ngoNovemba ecaleni kokunyuka kwexabiso lokunyuka kwamaxabiso kuphembelela uqikelelo lwabahlalutyi lokuba i-BoE inokunyusa amaxabiso kwakhona ngoFebruwari. Iingcali zobuchule zeHSBC mva nje ziphawule ukuba:
"Le datha yamva nje - intengiso eyomeleleyo yokuthengisa kunye nokuzithemba kwabathengi - icebisa ukuba icala lemfuno yoqoqosho lwase-UK lihlala liqinile, nokuba kuphezulu ukunyuka kwamaxabiso."
I-apex bank inyuse isantya sokunyuswa kwethayimthebhile ngo-2022, iphakamisa ukunyuka kwamaxabiso ukuya kuthi ga kathathu, xa kuthelekiswa nezimbini kuphela ngo-2021.
tags BOE, Forex, Umgangatho wenzala, iindaba, IPELA
I-GBP / USD Abathengi abomeleleyo!
I-GBP / i-USD yehlile emva kokufikelela kwinqanaba lokumelana okungagungqiyo. Okwangoku, ukwehla kunokuba yinto yethutyana kuphela njengoko isibini sibekwe ngaphezulu kwenkxaso enkulu enamandla. I-DXY ihlala iphantsi koxinzelelo lokuthengisa, ke ukuhla ngakumbi kufanele ukuba buthathaka i-greenback.
Ixabiso lehlile kancinci emva kwentlanganiso yangoLwesihlanu. Ngokobuchwephesha, mhlawumbi yayiyimpendulo yendalo. Kuya kufuneka ugcine ukhumbula ukuba umbono usashukuma, ngenxa yoko sisenokukhangela amathuba amade.
GBP / USD iye kubuya phantsi retest angumndilili kumgca ongezantsi (lml) loMthetho ifolokhwe zinyuka emele inkxaso ngamandla ezinamandla. Ixabiso livale ngaphezulu kunalo ukubonisa abathengi abomeleleyo kulo mgca.
Esi sibini sisavaleleke ngaphakathi kwentshukumo eyandisiweyo yecala. Ukuqhekeka kokugqibela kobuxoki ngezantsi kwe-1.4099 kunye nokunyuka okunyanzelekileyo okuprintwe kwindawo ye-confluence kunokubhengeza ukuqhubeka okuphezulu.
Ukuhlala ngaphezulu komgca ophakathi ophakathi (lml) kunokuzisa umfutho omtsha wokunyuka usiya kwiindawo eziphakamileyo zangaphambili.
tags GBPUSD, IPELA, Umbono woRhwebo, Iiponti zase-UK
I-GBP / i-SGD ye-Bullish Momentum!
Ukuhlaziywa: 27 April 2021
I-GBP / SGD ifumene inkxaso kwakhona kwinqanaba le-1.8381 kwaye ngoku ingaqala ukwanda kwakhona. Ukuqhawuka okungamanga ngaphezu komgca we-downtrend kuthumele ireyithi phantsi kwixesha elifutshane.
Okwangoku, i-bias iyakhula emva kokuba inqanaba lisilele ukuzinzisa ngezantsi kwenqanaba lokubuyiselwa kwe-23.6% kwiiveki zokugqibela kunye neenzame. Esi sibini sihamba ecaleni, kuluhlu oluncinci, ukuqhekeka okuphezulu kunokubonisa ukuzuza okungakumbi.
Uhlalutyo lweTshathi ye-GBP / SGD H4!
Uyabona ukuba i-GBPSGD ibhalise kuphela ukuphazamiseka okungeyonyani ngezantsi kwe-1.8381 nangomgca ophakathi ophakathi (lml) wefolkork enyukayo ebonisa amandla amatsha.
Ukuqhawulwa okusebenzayo ngaphezulu kwepivot yeveki (1.8468) kunokubonakalisa ukuphuma okuphezulu kwipatheni yokuwa komtshato ngokunjalo. Ukuqhekeka okufanelekileyo kwipateni yokuguqula kunokubonisa ukukhula okunokubakho kwi-1.8765 ephezulu ephezulu.
Ukusilela kwe-GBP / SGD ukuvala nokuzinzisa phantsi kwe-1.8381 kunokubonisa umlenze omtsha phezulu kwixesha elifutshane.
tags IGBP, GBPSGD, IPELA, sgd, Singapore Dollar
Iponti, i-USD, kunye ne-Euro Hlala kugxile ekuGqibeleni ngeeNtetho zoRhwebo, indlela yoNyulo yase-UK
Le veki izayo ibaluleke kakhulu kwikhalenda yezoqoqosho. Okokuqala lonyulo oluzayo lwase-UK olucwangciselwe ukubanjwa ngoLwesine, nge-12 ka-Disemba 2019. Okwesibini, umhla wokugqibela we-15 kuDisemba obekwe yi-US wokutyikitya isivumelwano sokuqala apho uMongameli uTrump wayesongele khona ukunyuka kwamaxabiso eempahla zaseTshayina kwimeko isivumelwano esingaphumelelanga.
Abatyalomali basemngciphekweni njengoko belindele iziphumo zonyulo e-UK apho uninzi lweevoti lwaluchaze ukuba abo baphumeleleyo baya kuphumelela. I-Brexit, ukuphuma kwe-Bhritane kwi-European Union kwenziwe izihloko eziphambili kulo nyaka ezichaphazele iponti.
Imfazwe yorhwebo phakathi kwezoqoqosho zimbini ziphambili, i-US ne China ibilibali eliphambili kulo nyaka. Kwiveki ephelileyo, uMongameli uTrump ubhengeze ukuba isivumelwano sokurhweba sinokulinda kude kube yi-2020.
Imisebenzi yebhanki esembindini nayo inokudlala njenge-ECB, iFed kunye ne-Swiss bank iya kutyhila umkhombandlela wemigaqo-nkqubo yezemali yakutshanje.
Indlela enokuthi ichaphazele ngayo iMarike yeMali
KwiDola yaseMelika-Kulo nyaka, ngokutsho kwabahlalutyi, ukubuyela umva xa kulinganiswa nengobozi yeemali ezilishumi ezinkulu kudlulile kulindelo. Nangona iibhanki ziqikelele imeko ye-bearish yedola kulo nyaka, yayiqhubekile nomoya.
Ngombono wethemba, abahlalutyi babona kusengaphambili ukurhoxiswa kwerhafu kwintengiselwano yokuqala yorhwebo eya kuthi ixhase idola kunye nezinye izinto ezinobungozi.
Ngenxa yoku, abahlalutyi bacebisa ukuba eli ingalixesha elifanelekileyo lokunika idola kunye nezinye iiasethi eziyingozi ngelixa kugcinwa iindawo ezikhuselekileyo.
Ngokuchasene noko, ukuba iminyhadala ithathe ithuba kwaye isivumelwano esingaphumelelanga senzeka, siyakuxhasa iindawo ezikhuselekileyo, iJapan Yen, iGolide, kunye neFrancis yaseSwitzerland. Ipondo kunye neemarike zentengiso ziya kuzuza koku, ngedola ithathelwe phantsi.
Pound-Zonke bezingahambanga kakuhle ngeponti yaseBritane kulo nyaka njengoko yayichukumisa iminyaka emithathu ngeyoMsintsi ngo-2019 ngelixa ibiphindaphindeka kancinci xa ithemba likaBrexit liphakanyisiwe kwaye kunyulwe unyulo lwangaphambili. Ngombono oqinisekileyo, ukuphumelela kukaBoris Johnson kunye nesininzi sokuphumelela epalamente kwii-Conservatives kuya kususa iponti.
Kwicala elisezantsi, bekukho isilumkiso esibonayo ukuba ii-polls azinakuba zichanekile kwaye abaphumeleleyo be-conservatives babonakala bengazinzanga njengoko unyulo lwalusondela kule meko, iindawo ezikhuselekileyo ziya kudityaniswa.
Iimarike zebond zazizuzile kulo nyaka xa iintetho zorhwebo kunye nesivumelwano seBrexit besithathe umbono wokwehla kwamandla emali kwihlabathi liphela. Uloyiko luye lwanefuthe elibi kwintengiso, kunye namanani emveliso akhutshiweyo, uloyiko lokudodobala koqoqosho emhlabeni luphakamile.
Euro-Imisebenzi yebhanki esembindini inokuxhasa i-Euro ngonyaka we-2020, ngenxa ye-ECB yokujonga imeko yezoqoqosho ngelixa abahlalutyi bexela kwangaphambili ukuba intshukumo yeFed inokujongela phantsi idola.
tags Euro, IPELA, Iintetho zoRhwebo, Unyulo lwase-UK, iUSD
IiNtetho zoRhwebo: Iingxelo ezichaseneyo zilinganisa ngeeMali
Ukuhlaziywa: 22 Novemba 2019
Kwezi veki zimbalwa zidlulileyo, iingxoxo zorhwebo phakathi kwe-US ne China beziziingxaki eziphambili zengxelo yeendaba. Iintetho zorhwebo phakathi kwala mazwe mabini anoqoqosho olukhulu bezingaziwa kwaye zininzi iingqikelelo. Abatyalomali babenethemba kumaxesha angaphambili malunga nokuba isonjululwe ngokukhawuleza xa omabini la mazwe ephuma esithi baqwalasele ukubuyiselwa umva kweerhafu ezibekwe kwimpahla yabo, ngeli xesha, idola kunye nezinye izinto ezinobungozi zithathe inxaxheba.
Amathemba apheliswa ngendlela xa iingxelo eziphikisanayo zaye zathi iingxoxo zorhwebo phakathi kwala mazwe mabini zafikelela kwisithintelo. Abatyalomali bagqibe kwelokuba bazinze kwizigqibo zabo bengaqinisekanga ngamanyathelo alandelayo kunye nokuba isivumelwano sokuqala siza kusayinwa nini.
Ibhanki ephezulu cum FX pro, iyiphindile into yokuba abatyali mali kunye nabarhwebi ngokufanayo sele bediniwe ziingxelo eziphikisanayo ezingenileyo kwaye bancamile ekubekeni ukubheja ngendlela engaqinisekanga. Amagosa aphezulu kuwo omabini la mazwe avakalise ukuba nethemba kwimpikiswano yezorhwebo isonjululwe kodwa oku kwabonakala kungonelanga njengoko iimvakalelo zazisele zinobunzima kwizimali.
Uninzi lweemali ezigcinwe zizinzile ngelixa idola lawela malunga ne-Euro.
Idola yaseMelika yehlile ngokuchasene ne-euro ukuze ithengise nge-1.1061 yeedola ngelixa yayihleli izinzile kwezinye iindidi zemali kwi97.958. Idola ibishukunyiswa ziingxelo ezixubeneyo ezivela kwiintetho zorhwebo. Amatyala amatsha aphunyezwe yi-senate yase-US malunga ne-Hong Kong abangele inkxalabo ngelixa iingcinga ziphezulu ukuba iintetho zityhalelwe kunyaka we-2020.
I-USD / i-yen yaseJapan ibanjwe izinzile kwi-yen ye-108.63 ngedola, engatshintshanga ukuqala kweveki.
I-Yuan yaseTshayina, ethe yachaphazeleka kakhulu ziindaba kwiintetho zorhwebo ezazibanjwe ziqinile ngo-7.0313 xa kuthelekiswa nedola yaseMelika.
Iponti ime izinzile kwi $ 1.2914, ekubeni buthathaka kancinci ngokuthelekiswa nedola kwi $ 1.30. Isikiti sathotywa ngenxa yokungaqiniseki okubhabha ngaphezulu konyulo oluzayo lwangoDisemba 12.
Emva kwexesha namhlanje, amanani emveliso evela kuqoqosho olukhulu oluyi-4, i-Bhritane, i-United States, i-Jamani kunye ne-Eurozone. Oku kukholelwa ukuba kunika isikhokelo ngakumbi kwimarike yemali. Kwakhona ukuba uphume emva kwemini kukukhanya kokuthenga isalathiso sabaphathi.
tags IsiTshayina Yuan, IPELA, Intetho zase-US-China zorhwebo
Izibalo zeNgqesho zilinganisa ngokuGwenxa kwi-AUD, amaNqaku okuPhembelela iiNtengiso ze-EUR kunye nePound elindelweyo
Ezindabeni kule veki, iJapan ikhuphe ikota yayo yekota yesithathu ye-GDP ngelixa i-Australia nayo ikhuphe amanani emisebenzi e-Okthobha.
Kwangoko namhlanje, i-China ikhuphe amanani ayo emveliso ye-Okthobha. Ubungqina obulindelwe kakhulu nguPowell kwiCongress kuqoqosho lwase-US nako kube nefuthe kwintengiso.
Ngokuhlalutya amanani emali apapashwe e-Australia ngo-Okthobha, xa kuthelekiswa noqikelelo lwangaphambili, ingqesho yehle nge-19,000, xa kuthelekiswa nolwando olulindelekileyo lwe-15,000. NgoSeptemba, inyuke ngaphezulu kwe-15,000. Njengoko bekuxeliwe kwingxelo ka-Okthobha, imisebenzi yexesha elizeleyo kunye neyesingxungxo yehle nge-19,000, ukubuyiselwa kukonyuka okungaphezulu kwama-250,000 kumanani ayo ngonyaka.
Emva kokukhululwa, iAussie yasuka kwi- $ 0.68365 yaya kwi- $ 0.68048. Ngoku ithengisa nge-0.6801 zeedola, -0.54%.
Uhlalutyo lwamanani emveliso yase China lubonise ukwanda kweepesenti ze-4.7 ngo-Okthobha, engaphantsi kwe-0.7 yepesenti yoqikelelo. Ipropathi, oomatshini, kunye nezixhobo zehlile nge-0.2% kuqikelelo nge-5.4%, ngelixa ukuthengisa kwintengiso kwehle nge-0.7% ukusuka kunyuso lwe-7.9%. Izinga lokungaqeshwa lihle nge-0.1%, ethathwa njengenzuzo. Ekuvukeni kweendaba, iAussie yawa.
Abatyalomali balinde amanani e-GDP avela kwi-eurozone naseJamani, kunye noqikelelo lokugqibela lwamanani e-inflation ngo-Okthobha asuka eSpain naseFrance.
Ngokubhekisele kwimpembelelo kwi-euro, amanani e-GDP yaseJamani kufuneka abaluleke kakhulu, ngelixa lawo eFrance naseSpain eya kuba nefuthe elincinci.
Okwangoku, i-euro iphakathi kwe-0.04% kunye ne-1.100 yeedola.
Amanani entengiso ka-Okthobha, alindelwe kamva kule veki, ayakuba nefuthe kwiponti njengoko iphinde yenyuka kancinci phakathi evekini, enokubangelwa lunyulo oluzayo. Isenokungarekhodali inzuzo emva kolu papasho, iponti ilahlekelwe yi-0.05% xa ithelekiswa ne-1.2845 USD.
I-yen yaseJapan inyuke ukusuka kwi-yen ye-108.801 ukuya kwi-108.778 yen emva kwezibalo ezilungileyo zoqoqosho. Ngexesha lokubhala, amaJapan azuze i- ¥ 108.78 xa ithelekiswa nedola yaseMelika, ifumana i-0.04%.
Njengoko kuphawuliwe, idola ye-kiwi yehle nge-0.25% ukuya kwi-0.6395 yeedola.
Amanani okunyuka kwamaxabiso ngo-Okthobha, kunye neengxoxo zorhwebo zase-US-China, zikwachaphazela idola, njengoko kukhusela uPowell ngomhla weSibini weeNkongolo. Idola liphakathi kwe -0.01% kunye ne-98.362.
Umnqweno we-OPEC womngcipheko wentengiso kunye namaxabiso eoyile ekrwada achaphazela idola laseCanada, ngelixa idatha yamaxabiso kaSeptemba yezindlu, eya kuthi ikhutshwe kamva emini, isenokungabinayo impembelelo ebalulekileyo.
I-loonie yenqabile i-0.04% ukuya kwi-1.3256 yeedola zaseCanada ngokuchasene nedola yaseMelika.
tags Aud, iTshayina, i-eur, IPELA, US